NASeA को सबल नेतृत्व र संस्थागत बिकासका लागि (२०१९-२०२१) अध्यक्ष पदमा डा. ठाकुर कार्कीको उमेदवारी - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७६ भदौ ४ गते २२:१९ मा प्रकाशित
डा. ठाकुर कार्की लामो समय देखि समाज सेवामा लागेको चिरपरिचित नामहो। उहा नेपाल सेन्टर ओफ नोर्थ कारोलिनाको सस्थापक सदस्य र भुतपुर्ब अध्यक्ष हुनुहुन्छा. त्यस्तै Triad नेपाली कामुनिटी सेन्टर को सदस्य, Association of Nepalese Agricultural Professionals of Americas (NAPA) को सदस्य तथा NRNA Science and technology committee को सदस्य भएर कम गरि सक्नु भएको छ ।
यही सामाजिक संस्थाहरुमा काम गरेको अनुभबलाई उहा फराकिलो platform NASeA मा काम गरी यो संस्थालाई एउटा उचाइमा पुरायुने उहाको विचार छ. उहाका कार्य योजनाहरु यस प्रकार छन् छन्:
 NASeA का एतिहासिक कामहरुलाई निरन्तरता दिने,
 सदस्यहरुको सुझाब संकलन गरी NASeA को दिर्घकालिन योजना र मार्गचित्र तयार पार्ने,
 नेपाल र नेपालीलाई अमेरिकामा चिनाउने नेपाल दिवस जस्ता कार्यक्रमहरू नेपालीहरूको उल्यख्य बसोबास भएका राज्यहरुमा विस्तार को पहल् गर्ने,
 परियोजनाहरू पहिचान गरी कार्यसमितिका सदस्यहरूको नेतृत्वमा समितिहरू गठन गरी विकेन्द्रित तरिकाले कार्य सम्पादन गर्ने,
 NASeA क्षेत्रका स्थानीय सस्थाहरुका वीच सिकाइ र अनुभवहरू आदानप्रदान गर्न एक समन्वय समिति बनाइ नियमित अन्तरक्रिया गर्ने,
 नेपाली सांकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि स्थानीय संस्थाको अगुवाइमा नेपाली सामुदायिक केन्द्रहरू बनाउन समन्वयकारी भूमिका गर्ने,
 क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सकेसम्म राज्य नदोहोरिने गरी आलोपालो गर्न पहल गर्ने,
 हाम्रो संस्कृति र जिम्मेबारीलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रम ल्याउने,
 समुदायका सदस्यहरूसंग भएको ज्ञान, सीप र दक्ष्यता अन्य सदस्यहरूको वृत्तिविकासमा टेवा पुग्ने गरी मेन्टरसिप कार्यक्रम लागु गर्ने,
 नासा-आन्माको सहकार्यलाई बार्षिक सम्मेलनका अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमहरू पहिचान गरी कार्यन्वयन गर्ने,
 अमेरिकि संस्थाहरु, नेपाली दुताबास्, र एनआरएनएसंग सहकार्य गर्ने|